Cabdirisaaq Janogale oo ku dhawaaqay in uu yahay Musharax u Taagan qabashada xilka Madaxtinimada ee Puntland -
Minneapolis – Prof. Cabdirisaaq Jamac (Janogale) ayaa munaasabad balaadhan oo lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota uga dhawaaqay in uu yahay musharax u taagan tartanka xilka Madaxweyninimo ee Puntland ee bilowga sannadka 2019 lagu wado in ay ka dhacdo guud ahaan deegaannada maamulka Puntland.
Warsame Xasan oo ka hadlay daah-furayna musharaxnimada, hogaan wanaaga iyo taageerada prof. Janogale
Musharax prof Cabdirisaaq Jaamac (Janogale) ayaa sheegay haddii uu ku guulaysto xilka Madaxweyne in uu muhiimada koobaad uu siinayo shacabka oo yeesha hanashadda hogaanka, isla markaasna ay kaalin balaaran ku yeeshaan hogaanka dowladda. Prof Jano Gale ayaa yiri, “waxaan noqonayaa qof fuliya dastuurka u dhexeeya dadka iyo dowladda” taas oo uu u arko sida kali ah ee ay ku soo noqon karto kalsoonida shacabka.
Ifraax Bashir oo qudbad kooban oo ay jeedisay uga hadashay baahida dhabta ah ee ay qabaan dhallinyarada iyo haweenka Puntland
Sidoo kale murashax Janogale ayaa sheegay in uu wax ka qaban doono, arrimaha ammaanka, waxbarashada, caafimaadka, caddaaladda, dhaqaalaha, shaqo abuurka dhalinyaradda, dib u dhiska nidaamka ciidanka iyo arrimo kale.
Sheekh Cabdirisaq Xaashi oo u dardaarmay in uu murashax Janogale uu diinta Islaamka ahmiyada koobaad uu siiyo.
Dhinaca kale waxa uu ku baaqay prof. Janogale in haddii la doorto uu dhisi doono guddiyo madaxbanaan oo ay kamid yihiin guddiga anshaxa, guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa, si ay Puntland u hesho dowladd iyo hogaan wanaagsan oo ku dhisan Caddaalad iyo nidaam dowladeed oo sugan.
Cumar Fatax oo ah murashax u taagan Golaha sharci dejinta Minnesota ayaa sheegay in Janogale uu yahay qof lagu kalsoonaan karo.
Prof. Cabdirisaaq Janogale ayaa sheegay in uu gudiyadaas u soo xuli doono dad sumad wanaagsan ku dhax leh bulshada, aqoon iyo waayo aragnimo la xaqiijiyeyna wata si ay u hogaamiyaan gudiyaasha madaxabanaan ee uu sameyn doono.
Qaar kamid ah dadweynihii ka soo qaybgalay munaasabada murashax pro. Janogale oo u taagan madaxtinimada Puntland
Munaasabaddan oo si wanaagsan loo soo agaasimay ayaa waxaa xidhiidhinayey mudane Muriidi Warfa, waxaana ka soo qayb galay qaar kamid ah odeyaasha dhaqanka, culumada, aqoonyahano iskugu jira haween iyo rag, ganacsato, abwaano, qaar kamid ah hogaamiyeyaasha iyo waliba waxgarad kale oo dhammaantood musharax prof. Cabdirisaaq Janogale u muujiyey taageero balaaran.
Qaar kamid ah haweenkii ka soo qaybgalay munaasabada murashax pro. Janogale oo u taagan madaxtinimada Puntland
Haddaba munaasabaddan oo aanan loo kala harin ayaa waxaa ka mid ahaa dadkii iyo mari sharaftii meesha ka hadlay, qudbaddo kala duwana ka jeediyey, Warsame Xasan Sahal, Xasan Huruuse, Ifraax Bashir, Cumar Fatax, Sheekh Cabdirisaaq Xaashi, Daahir Jibril, Sheekh Cabdirisaaq Sancaani, Hodan Adan, Jamilo Jibril, Liban Adan iyo Khalid Mohamed. Dhamaan dadkii munaasabada qudbadaha kala duwan ka jeediyey ayaa musharax prof. Janogale ku amaaay karti, hogaan wanaag, aqoon iyo rabitaan dhab ah oo uu rabo in uu dadkiisa iyo dalkiisa wax ugu qabto.
Muriidi Warfa oo isagu ahaa xiriiriyaha munaasabada murashax pro. Janogale oo u taagan madaxtinimada Puntland
Cabdirisaaq Janogale ayaa qeyb ka noqday dhawr iyo toban murashax oo u taagan tartanka jagada Madaxweynenimada ee Puntland. Waxaana deegaannada qaar ka socda abaabul ay isku soo muujinayaan musharixiinta qaarkood, halka uu musharax Janogale uu isagu olalihiisa ka bilaabay gobolka Minnesota. Murashax prof. Janogale ayaa balanqaaday in uu qorshihiisa oo dhamaystiran u la wadaagi doono, uuna horgeyn doono dhamaan qaybaha kala duwan ee shicibka reer Puntland.
Sawiradda: Isma Muse
Related Items:Featured, Janogale, President of Puntland, Puntland
Maamulka Gobolka Shabeelaha Hoose oo Kormeer kusameynaya Deegano kamid ah Gobolkaas